စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: August 2009
သိပ်ကို များတယ် အမေ
ငယ်ငယ်က တွေးမိတယ် အမေ
လူကြီးတွေ ဘာလို့ ညာတတ်သလဲ
အခုတော့ သိပီ အမေ
ပြည့်စုံ (၃၁-၈-၂၀၀၉၊ ၂း၁၂ pm)
at 4:08 AM Labels: ကဗျာ၊ အတွေးပုံရိပ်
နှလုံးသားထဲ အလွမ်းမိုးတွေ ရွာဆဲပါပဲ….
ပြည့်စုံ (၂၀-၈-၂၀၀၉၊ ၂း၃၇ pm)
at 1:34 AM Labels: ကဗျာ၊ သတိရခြင်းများ
အရာရာကို အသစ်က ပြန်စမယ်လို့ ပြောချင်ပေမဲ့
ပြည့်စုံ (၂၀-၈-၂၀၀၉၊ ၁း၅၁ am)
at 9:22 AM Labels: ကဗျာ၊ ခွဲခွာခြင်းနိမိတ်ပုံ
မျက်ရည်ကျမှ ငိုပြတာ မဟုတ်သလို
သွားဖြဲပြတိုင်းလဲ ရယ်ပြတာ မဟုတ်ဘူး
မိတ်ဆွေ လူ့အကဲကို သေသေချာချာ ခတ်ပါ......
ဘဝဟာ ထင်သလောက်လဲ မရိုးရှင်းဘူး
အချက်တွေကို ခိုင်လုံအောင် စုစည်းကာမှ
ဘဝက ဘကုန်းနဲ့ဝလုံး ပေါင်းထားတာတဲ့
ဒါပေမဲ့ မရုန်းနိုင်တဲ့ နှောင်ကြိုးထဲ
ပြည့်စုံ (၁၇-၈-၂၀၀၉၊ ၁၀း၄၆ pm)
at 9:52 AM Labels: ကဗျာ၊ အတွေးပုံရိပ်
အနက်မှောင် ပြောင်ပြင်ပြင် ကောင်းကင်ကြီးထဲ
ပြာလဲ့လဲ့ အလင်းရောင်တောက်နေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးထဲ
သီချင်းအတူတူ အော်ဆိုနေတဲ့ မောင်နှမတစ်စုရှိတယ်
မုန့်တစ်ခုကို ဝေမျှစားနေတဲ့ မောင်နှမတစ်စုရှိတယ်
အရာရာကို ရယ်စရာဟာသအသွင် သဘောထားတဲ့ မောင်နှမတစ်စုရှိတယ်
လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ အားအင်တွေရှိတယ်
ပြန်ဆုံရင် ပျော်ရွှင်ရမယ့် မောင်နှမတစ်စုရှိတယ်
ပြည့်စုံ (၁၆-၈-၂၀၀၉၊ ၃း၂၈ pm)
at 1:31 AM Labels: ကဗျာ၊ မျှော်လင့်ချက်
လေနှင်ရာ မျောလွင့်တဲ့ ရွက်ကြွေကလေး
လေနှင်ရာ မျောလွင့်သွားတဲ့ ရွက်ကြွေကလေးတွေကို သူ ငေးကြည့်နေခဲ့မိဖူးတယ်.
သစ်ရွက်စိမ်းကလေးဘဝ သစ်ပင်ပေါ်မှာတုန်းက သူဟာ ကြွားကြွားဝင့်ဝင့် မားမားစွင့်စွင့် ရှိနေပါလိမ့်မယ်. အခုတော့ လေနှင်ရာပြေး သစ်ပင်ရဲ့နံဘေးမှာ မနေနိုင်တော့ဘူးလေ.
ရွက်ခြောက်ကလေးဘဝ လေတိုက်ရာ ရှောတိုက်နေရင်း ဘဝတူ သစ်ပင်ပေါ်က သစ်ရွက်ကလေးတွေကို ပြန်ငေးကြည့်မိတယ်. မင်းတို့ကတော့ လှလှပပ ပင်ယံထက်မှာ ကြွကြွရွရွ ရှိနေတုန်းပဲပေါ့.
ဟော ဖြုတ်ဆို သုတ်ခနဲ လေအဝှေ့ မာန်ကြွနေရှာတဲ့ ခေါင်ထိပ်က သစ်ရွက်ကလေး လေအနော့မှာ ကြွေကျသွားပါလေရောလား. သစ်ရွက်ခြောက်ကလေးက ခပ်တိုးတိုးအရယ်မှာပဲ သူ့အပေါ် နင်းခြေမွမယ့် ခြေသံတစ်စုံ တိုးဖွဖွလေး နီးကပ်လာနေတယ်.
ကတ္တီပါသဲကြိုးအနက်ကလေးရဲ့ စိုထင်းမှုကို အံ့သြတကြီး ကြည့်အနေမှာပဲ ရက်စက်တဲ့ ကံကြမ္မာက သူ့ကို သက်ဆိုးရှည်ခွင့်မပေးခဲ့ပြန်ဘူးလေ.
ဖိနပ်ပါးကလေးနင်းချေသွားတဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ ကံကုန်သွားတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်လေးတွေ များစွာ ရှိပါလိမ့်မယ်. သူလဲ တစ်ရွက် အပါအဝင်ပေါ့.
ဒီလိုအတွေးမှာပဲ လေညင်းရဲ့သယ်ဆောင်ရာ ဖိနပ်ပါးကလေးအောက် သစ်ရွက်ခြောက်ကလေး ရောက်သွားရှာလေရဲ့.
at 9:41 AM Labels: ရင်ဖွင့်ရာ အတွေးပုံရိပ်
at 9:17 AM Labels: ကဗျာ၊ အငှားရင်ခုန်သံ
စနစ်တကျ အလွဲတွေကြားမှာ ရှင်သန်လာရတာပါ
ရေရာမှု မရှိတဲ့ အခြေအနေတွေထဲ
လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ရုန်းကန်ရတဲ့သူချည်းပါပဲ
အရာရာ အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်တုန်းက ပြုံးပျော်နေသလောက်
မင်းဘေးမှာ သင့်တော်မယ့်အဖော်အသစ် ရခဲ့မယ်ဆိုရင်
မင်းအတွက် ကြည်နူးစိတ်နဲ့ ငါ ဝမ်းသာပေးမယ်လေ
မင်းဘေးမှာ ငါဆက်ရှိနေဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ မင်းယူဆတဲ့အခါဆိုရင်လဲ
မင်းဘေးမှာ အမြဲတမ်း ငါရှိရမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တာမှ မဟုတ်တာပဲကွယ်
မင်းအတွက် စိတ်ပေါ့ပါးမှုကို ငါမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် စိတ်ရှုပ်မခံပါနဲ့ ချစ်သူ
ငါကတော့ ငါချစ်နိုင်သလောက် အချစ်တွေနဲ့ မင်းကိုချစ်နေမယ်
တစ်သက်စာလို့တော့ မပြောချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဒဏ်ရာတခုလိုပါပဲ
ငါ့ရင်မှာတော့ မင်းကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာမဟုတ်ဘူး
Hi နဲ့ စခဲ့ရင်
Good Bye တစ်ခွန်းနဲ့တော့ အဆုံးသတ်သင့်ပါရဲ့……….
ပြည့်စုံ (၅-၈-၂၀၀၉၊ ၁၀း၀၀ pm)
at 2:44 AM Labels: သတိရခြင်းများ
ချစ်ခြင်းရဲ့ ခြေရာတွေကို ဖွေရှာနေမိတယ်
ချစ်ခြင်းရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ဖွေရှာနေမိတယ်
ချစ်ခြင်းရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို ဖွေရှာနေမိတယ်
ချစ်ခြင်းရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ဖွေရှာနေမိတယ်
ဒီလိုနဲ့ လှိုင်းလုံးတွေ ရိုက်တယ်
ပြည့်စုံ (၂-၈-၂၀၀၉၊ ၁၁း၃၅ pm)
at 3:04 AM Labels: ကဗျာ၊ အတွေးပုံရိပ်